Hello Nepal News » पहिलो लेग जितेको म्यानचेस्टर सिटीलाई नेइमारले दिए यस्तो ‘चेतावनीमूलक’ सन्देश
पहिलो लेग जितेको म्यानचेस्टर सिटीलाई नेइमारले दिए यस्तो ‘चेतावनीमूलक’ सन्देश
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलअन्तर्गत पहिलो लेगको खेलमा फ्रेन्च क्लब पिएसजी दुई दिनअघि आफ्नै घरेलु मैदानमा पराजित भयो । उसलाई इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीले १–२ को अन्तरमा स्तब्ध बनायो । पिएसजीले आफ्नो घरेलु मैदानमा पहिला खेलमा अग्रता बनाए पनि त्यसलाई बचाउन नसक्दा घरेलु मैदानमै पराजय भोग्नु परेको थियो ।
अवे लेग सिटीले २ गोलका साथ स्पष्ट अन्तरमा जितेकाले उसले फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ । अब आफ्नो घरमा सिटी दोस्रो लेग खेल्दा ०–१ ले पराजित भए पनि केही फरक पर्दैन । यता, पिएसजीले भने फाइनल प्रवेशका लागि सिटीको घरेलु मैदानमा कम्तीमा ०–२ को जित वा २–३ को जित निकाल्नुपर्छ । यी दुईमध्ये कुनै पनि अवस्थामा पिएसजी सिटीलाई पछि पारेर फाइनल प्रवेश गर्नेछ ।
उपाधिका दुई दाबेदार टिम सेमिमै भिडिरहेकाले यो खेलमाथि धेरैको नजर छ । यी दुई फाइनल प्रवेश गर्न एकले अर्कोलाई सेमिमै पन्छाउनुपर्ने हुन्छ । सिटीले पहिलो लेग अवे मैदानमा जितेकाले उसलाई धेरैले फाइनल प्रवेशका लागि प्रमुख दाबेदार मानेका छन् । के सिटीले अब होम लेगमा पहिलो लेगको अग्रता बचाउन सक्ला ? वा, पिएसजीले सिटीविरुद्ध दोस्रो लेगमा नतिजा उल्टाएर फाइनल पुग्ला ? अबको यो खेलमाथि धेरैको नजर रहनेछ । यो खेल मे ४ मा हुनेछ ।
नेइमार भन्छन्– ‘खेल सकिएको छैन, लडाइँ जारी छ’
सिटीसँग होम लेगमा हारेपछि पिएसजीका स्टार खेलाडी नेइमारले दोस्रो लेगको खेललाई लिएर सिटीका नाममा चेतावनीमूलक सन्देश दिएका छन् । खेलपछि मिडियासँग कुरा गर्दै उनले पहिलो लेगमा सिटीले आधा लडाइँ जिते पनि लडाइँ नसकिएको बताएका छन् । दोस्रो लेगमा पिएसजीले नतिजा उल्टाएर फाइनल पुग्ने दाबी नेइमारले गरेका छन् ।
‘हामीले पहिलो भागको लडाइँ हारेका हौं । तर, लडाइँ अझै जारी छ । यो नै अन्तिम नतिजा होइन । त्यहाँ अझै ९० मिनेटको खेल बाँकी नै छ,’ नेइमारले भनेका छन्, ‘पिएसजी बाँकी दिनमा शान्त हुनेछ । र, दोस्रो लेगका लागि होमिनेछ । अझै पनि हाम्रो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लक्ष्य भनेकै फाइनल प्रवेश हो ।’
नेइमारले खेलपछि सामाजिक सन्जालमा पनि पहिलो लेगको हार र दोस्रो लेगको खेलबारे लेखेका थिए । उनले ट्वीटरमार्फत् ट्वीट गर्दै पहिलो लडाइँ हारे पनि लडाइँ जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, नेइमारले आफ्नो टिममाथि आफूलाई विश्वास रहेको कुरा पनि बताएका छन् । दोस्रो लेगमा आफूहरूले राम्रो गर्न सक्ने उनले विश्वास लिएका छन् । नेइमारले ट्वीटमा भनेका छन्–
‘हामीले यो लडाइँमा हार्यौं तर यो अझै पनि जारी छ । मेरो टिममाथि मलाई विश्वास छ । मलाई विश्वास छ कि, हामीले जति गर्न सक्यौं, त्योभन्दा अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौं । हामी १ प्रतिशत सम्भावनामा ९९ प्रतिशत विश्वास गर्छौं ।’
खेलपछि मिडियासँग कुरा गर्दै नेइमारले आफूहरूले होम लेगमा अपेक्षाअनुसार गर्न नसकेको तर दोस्रो लेगमा राम्रो गर्ने दाबी गरेका थिए । ‘हामीले सोचेअनुसार पेरिसमा राम्रो गर्न सकेनौं । हामीले २ गोल खाए पनि धेरै गोल गर्न सक्नेथियौं । तर, हामी निराश भएका छैनौं । हामी दोस्रो लेगमा नतिजा उल्टाएर लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौं,’ नेइमारले भने, ‘सिटीको घरेलु मैदानमा हामी उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछौं ।’
प्रकाशित मिति १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार ०६:५८